ZUI 11.5 beta wuxuu hirgeliyaa Android 10 iyo isdhexgalka Windows PC ee Lenovo Z6 Pro | Androidsis
Maalmo ka hor waxaan ka hadalnay cusbooneysiinta cusub ee ah Samsung Galaxy A70s, taas oo, iyo waxyaabo kale, ku daraya waafaqid kombiyuutarrada Lenovo Windows, kaas oo u oggolaanaya shaqooyinka kala duwan ee casriga ah in laga maareeyo shaashadda kombiyuutarka iyadoo la sheegay OS.
Hadda, terminal kale oo hela shaqo la mid ah ayaa ah Lenovo Z6 Pro, waana ku mahadsantahay xirmada qalabka cusub ee kugu soo socota, ee lagu bixiyo qaabka beta.
Beta ZUI 11.5, laftiisa, waa cusbooneysiin cusub oo dadka isticmaala Lenovo Z6 Pro ay hadda heli karaan. Haddii aad leedahay taleefanka iyo kombiyuutarka Lenovo, waxaad tijaabin kartaa muuqaalka adoo ku dhejinaya cusboonaysiinta beta ugu dambeysay isla. Cusboonaysiinta beta ayaa la sii daayay maanta waxayna sidoo kale keenaysaa Android 10 qalabka, laakiin isdhexgalka kumbuyuutarrada Windows ayaa kaliya la shaqeeya kuwa ka socda Lenovo, maadaama ay taageero u hayaan Lenovo One, taas oo ah muuqaalka u oggolaanaya dhammaan sixirku inuu dhaco oo horeyba looga heli jiray mobilada.
Su’aal, cusbooneysiintu waxay u timid sidii ZUI 11.5.120 waxayna keeneysaa interface cusub oo adeegsadeyaal ah, tiro ka mid ah hagaajinta, hagaajinta cilladaha, iyo qaababka cusub ee taleefanka calanka. Lenovo sidoo kale waxaa ku jira liiska dhibaatooyinka suurtagalka ah ee aad la kulmi karto haddii aad go'aansato inaad ku rakibto nooca beta. Waxaan kugula talineynaa celceliska isticmaalaha inuu sugo cusbooneysiin xasilloon, maxaa yeelay waxay u badan tahay in cusbooneysiintu ay yeelan doonto dhibaatooyin badan, taas oo aad u macquul ah maadaama ay tahay nooc tijaabo ah oo aan kama dambeys ahayn.
Waqtigan xaadirka ah, ma ogin haddii Lenovo One loo heli doono dhamaan taleefannada Lenovo ama kaliya kuwa heli doona cusbooneysiinta Android 10. Waxaan dhawaan heli doonnaa warar qaar ama macluumaad gaar ah oo gaar ah oo laga helo soo saaraha Shiinaha laftiisa, hubaal. Waxaan rajeyneynaa inay dhowaan noqon doonto, maadaama ay jiraan isticmaaleyaal badan oo raba inay isku dayaan shaqadan cusub una qalmaan dhammaan faa'iidooyinka Android 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZUI 11.5 beta wuxuu hirgeliyaa Android 10 iyo isdhexgalka Windows PC ee Lenovo Z6 Pro
Pep Reyes dijo
hello galab wanaagsan xagee iyo sidee ku heli karaa cusbooneysiinta cusub ee lenovo z6 pro
Ku jawaab pepe reyes